Guddiga Nabad galyada Gobolka Nugaal oo maanta kulankoodii uga hadlay ururada siyaasada Puntland.
Kulan ay maanta guddiga ?nabad galyadu ku yeesheen ?xarunta gobolka ee magaalada Garoowe ayaa ?waxaa ay soo saaraan? qodobo dhowr ah oo lagu wajahayo amaanka guud? iyo ilaalinta shirarka ay ??ururada siyaasada Puntland ku yeeshaan magaalada Garoowe ee caasimada Puntland, kuwaas oo gudoomiyuhu ku sheegay in lagu soo dhex dhuuman karo,Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) oo kadib shir-jiraaid qabtay ayaa sheegay in guddigu uu isku raacay qorshe gaar ah oo lagula ?macaamilayo amniga ururada siyaasada ee Puntland,
Gudoomiye (Qarjab)? ayaa ?ugu baaqey ururada siyaasada in guddiga? nabad galyada lagu soo war galiyaan marka ay ururadu? shirar ku qabsanayaan magaalada Garowe si loo sugo amaankooda? islamarkaana loola socda cidii shirkaasi dano gaar ah ka leh oo amaanka lidku ah.
Arimahaan oo idil? ayaa waxay kusoo beegmayaan xilli ururada siyaasadeed ee ?Puntland ay si xowli ah shirar ugu qabsanayaan magaalada Garowe waxaana magaalada ?soo buux dhaafiyey? dad ay marti galiyeen ururadaasi.